२ बर्षमै १० लाख सव्सक्राईभर्स पाएर शिशिर भण्डारीले नेपालको युटुबमा रेकर्ड तोडे (भिडियो हेर्नुस) – Etajakhabar
काठमाडौं- रेडियो, टिभी कार्यक्रम प्रस्तोता हुँदै फिल्म र फिल्मपछि युटुबको दुनियाँमा आएका शिशिर भण्डारीको युटुब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपाल छोटो समयमै १० लाख सव्सक्राईभर्स कमाउने नेपालकै पहिलो च्यानल बनेको छ । वान मेन आर्मी शिशिरको च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपालले २ बर्ष २ महनामै दर्शकहरुको अपार माया र साथ पाउँदै १० लाख सव्सक्राईभर्स कमाएको हो ।
शिशिरले २०१७ को जनवरी २१ मा नयाँ नयाँ न्युज नेपाल खोलका थिए । उनको च्यानलले केहि समयमै १ लाख सव्सक्राईभर्स पाएको थियो भने अहिले २०१९ को मार्चसम्म आउँदा १० लाख सव्सक्राईभर्स र ८ करोड ५०लाख माथिको भ्युज पाईसकेको छ । यसरी छोटो समयमै नेपालमा कुनै पनि च्यानलले १० लाख सव्सक्राईभर्स कमाएको छैन ।
अघिल्लो समयमा मनोरन्जनात्मक भिडियोहरु युटुबमा हाल्ने शिशिरले अघिल्लो महिनामै २ लाख कमाई गरेको बताएका छन् । हेरौं, उनले हालसम्म कति कमाए ? एक महिनामा कति कमाउँछन् ? स्टार न्ुज नेपालको रबिन पौडेलसँग शिशिर भण्डारीको कुराकानी ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र ०८, २०७५ समय: १५:४२:२३